Indlela yokusetha kwakhona iWindows 10 Ikhompyutha
Xa ujongene nekhompyuter egula kakhulu, ngamanye amaxesha uyifaka kwakhona Windows 10 kuphela kwonyango. Kwixesha elidlulileyo, ukufaka kwakhona iiWindows kwathatha ixesha elininzi kunye nomzamo. Xa usongeza ixesha elichithwe ukufaka iiWindows kunye nexesha elichithwe ukukopa iifayile kunye neenkqubo zakho kwakhona kwikhompyuter, unokuba ujonge umsebenzi wesiqingatha sosuku.
ipilisi emhlophe kwi-136
Windows 10 ijolise ekusombululeni ingxaki. Ngokutyhala amaqhosha ambalwa, unokuxelela iiWindows ukuba zizibuyisele kwakhona kwikhompyuter yakho. Kwaye ngelixa ufaka ikopi entsha yayo, iiWindows zigcina iiakhawunti zomntu wonke, iifayile zomntu wonke, iiapps zazo ezikhutshelwe kuVenkile lweWindows, kunye nolunye lwezona zicwangciso zibalulekileyo.
Ukwenza ukusetha kwakhona kugcina useto kunxibelelwano lwenethiwekhi olungenazingcingo nakunxibelelwano lwakho lweselula, ukuba unayo. Isixhobo sokusetha kwakhona sikhumbula nayiphi na i-BitLocker kunye neBitLocker-To-Go useto, izabelo zokuqhuba iileta, kunye noseto lomntu, kubandakanya imvelaphi yakho yokutshixa kunye nephepha lodonga.
Xa ikhompyuter yakho ivuka iziva ihlaziyekile kunye nekopi yayo entsha yeWindows, kuya kufuneka ufake kwakhona iinkqubo zakho zedesktop. (Inkqubo ngokuzithoba ishiya uluhlu olusebenzayo lwale nkqubo kwi-desktop yakho, igcwaliswe ngamakhonkco ewebhusayithi, ukuba kunokwenzeka, ukuze wazi ukuba ubuyisele ntoni kwakhona.)
Isixhobo sokusetha kwakhona sinokuya kwelinye inyathelo, ukuba uyathanda, ngokusula ikhompyuter yakho icoceke ngokupheleleyo yonke into Iiakhawunti zomsebenzisi, idatha kunye neefayile zobuqu. Emva koko Windows 10 ziphinda zizibuyisele, ngokungathi ikwi-PC entsha. Oko kukuvumela ukuba uqale ekuqaleni okanye unike ikhompyuter yakho isizalwane okanye isisa ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuvuza ngolwazi lwakho.
Ukuseta kwakhona iPC yakho egulayo, landela la manyathelo:
Cofa iqhosha lokuQala kwaye ukhethe Useto kwimenyu yokuqala.
ungathatha i-motrin nge-tramadol
Inkqubo yeeSetingi iyavela.
Cofa iNkqubo yoHlaziyo kunye noKhuseleko lwe icon. Xa uHlaziyo kunye noKhuseleko lwewindow livela, cofa indawo yokubuyisela kwindawo ekhohlo. Ke, kwicandelo elibizwa ukuseta kwakhona iPC yakho, cofa indawo ethi Qalisa.
Ukuba ubuziwe, faka idiski yeWindows, idrive drive, okanye enye into oyisebenzisileyo ukuqala ukufaka iWindows. Awunayo idiski yokufaka yeWindows okanye uqhube? Emva koko cofa Rhoxisa. Awunakho ukusebenzisa i Cwangcisa kwakhona ukhetho, ngelishwa.
IiWindows zibonisa iwindow eboniswe apha, enikezela ngeendlela ezimbini zokusetha kwakhona ikhompyuter yakho.
Ngaphandle kokuba unesizathu esivakalayo, khetha Gcina iifayile zam.
Khetha ukhetho kwaye ucofe ulandelayo.
Isixhobo sokusetha kwakhona sibonelela ngeendlela ezimbini:
Gcina Iifayile Zam: Olona khetho lusetyenzisiweyo, oku kufaka kwakhona iiWindows, kodwa kugcina iiakhawunti zomsebenzisi kunye neefayile zomntu wonke. Ekuphela kwento ophulukana nayo yile iinkqubo zedesktop , ekufuneka iphinde ifakwe kwiidiski zazo okanye kwiifayile zokufaka. Ukuba ukhetha olu khetho, tsibela kwiNyathelo 6.
Susa yonke into: Khetha oku kuphela xa ufuna ukusula yonke into kude nekhompyuter yakho, kubandakanya iiakhawunti zomsebenzisi kunye neefayile zomntu wonke, kwaye ufake kwakhona iiWindows 10. Emva koko ungaqala ekuqaleni okanye uthengise ngokukhuselekileyo okanye unikele ngekhompyuter yakho kwabanye. Ukuba ukhetha oku, yiya kwiNyathelo 5.
Khetha ukuba ususe iifayile zakho okanye ususe iifayile kunye nokucoca idrive.
isetyenziselwa ntoni i-lisinopril
IWindows ikunika ukhetho ezimbini:
Susa nje iifayile zam: Khetha olu khetho kuphela xa ikhomputha yakho ihleli kusapho lwakho. Nangona olu khetho lukhuselekile, umntu onezixhobo ezifanelekileyo unokukwazi ukufumana ulwazi olucinywe ngaphambili.
Susa iifayile kwaye ucoce ngokupheleleyo iDrive: Khetha olu khetho xa uzimisele ukuthengisa okanye unikele ngekhompyuter yakho kubantu ongabaziyo. Olu khetho lususa idatha yakho kwaye lukhuphe i-hard drive ongezelelweyo ucocekile. Oko kugcina wonke umntu ngaphandle kwezona ngcali zinikezelweyo ezinezixhobo zokubuyisa idatha ezibizayo.
Xa ucofa ukhetho kwaye ucofe iqhosha lokuseta kwakhona, iWindows isusa yonke into kwikhompyuter yakho, icoca ngokupheleleyo idrive, ukuba iceliwe, iphinde izibuyisele ngokwayo ukushiya ikhompyuter yakho nekopi entsha ye Windows 10. Ngelo xesha, ugqibile, kwaye ikhompyuter yakho ikulungele ukuqala ngokutsha okanye ukunikwa ngokukhuselekileyo.
yintoni ephantsi kwembambo yakho yasekunene
Qaphela ukuba zeziphi iinkqubo zedesktop eziya kufuna ukuphinda zifakwe kwakhona, emva koko ucofe u-Okulandelayo, kwaye ucofe iqhosha lokuseta kwakhona.
IWindows iyazibuyisela kwikhompyuter yakho, ethatha naphina ukusuka kwimizuzu eli-15 ukuya kwiyure. Xa ikhompyuter yakho ivuka, kufuneka izive ihlaziyekile kwaye ilungele ukusebenza kwakhona. Lindela naziphi na okanye zonke ezi zinto zilandelayo ukuba zenzeke xa useta ikhompyuter yakho kwakhona:
Ukuba ufake iWindows DVD kwikhompyuter yakho kwiNyathelo 2, lumka xa ikhompyutha yakho iqala ngokutsha. Njengoko iqala kwakhona, ikhompyuter yakho inokukucela ukuba ucofe naliphi na iqhosha lokuvula kwi-disc. Don ' t cofa naliphi na iqhosha; endaweni yoko, linda imizuzwana embalwa de umyalezo unyamalale. Ke iiWindows ziyazilayisha zivela kwikhompyuter yakho esandula ukuvuselelwa ihadi Drayivu endaweni yokufakwa kweDVD yeWindows.
Xa ikhompyuter yakho ivuka kwaye ungene, ufumana indlela emfutshane ebizwa ngokuba ziiNkqubo eziSusiweyo ezilinde kwidesktop yakho. Cofa kuyo, kwaye isikhangeli sakho sewebhu sibonisa iphepha elinamakhonkco kuzo naziphi na iinkqubo zedesktop ekufuneka uzifakile - ukuba uthatha isigqibo sokuba uyazikhumbula, oko kukuthi. (Kwaye ukuba wena yenza uziphose, kufuneka ufakele ii-disc zenkqubo ukuze uzifake kwakhona.)
Kungekudala emva kokuba iWindows ivukile, ityelela uHlaziyo lweWindows kwiWindows ukukhuphela kunye nokufaka ii-oodles zokhuseleko, kunye neekopi ezihlaziyiweyo zeeapps zayo. Bamba inoveli elungileyo.
Emva kokusetha kwakhona ikhompyuter yakho, faka kwakhona iinkqubo zakho zedesktop nganye nganye, ukuqala kabusha ikhompyuter yakho emva kofakelo ngalunye olutsha. Oko kukunika elona thuba lilungileyo lokuzikhupha naziphi na iinkqubo zokuziphatha kakubi ezinokubangela iingxaki eziphazamise izinto.
Ukuba uqhagamshele kwinethiwekhi, kungafuneka uxelele iiWindows ukuba ukwi ekhaya network okanye a esidlangalaleni inethiwekhi. Kuya kufuneka uphinde ujoyine iqela lakho lasekhaya.
Ukuba ususile i-hard drive yakho icocekile, ungasebenzisa iFayile yeMbali yogcino ukubuyisela iifayile ezazikhe zahlala kumaxwebhu akho oMculo, oMfanekiso, kunye neeVidiyo.
i-clobetasol ye-lichen sclerosus
ukutshisa iintlungu phantsi kwembambo yasekunene
Umgaqo we-picc wokugungxula umgaqo
yintoni iziyobisi yiasidi
I-roxy 30 mg ipilisi eluhlaza okwesibhakabhaka
rho d i-immune globulin